How does computer work? - YGNCode
Posted on Published February 8, 2020 July 14, 2019 by Set Kyar Wa Lar (Universe)
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မတက်ခဲ့ရတော့ ကွန်ပျူတာတွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာသေချာ Detail မသိဘူး (Computer တက္ကသိုလ်တက်မှ Abstraction တွေကိုကျော်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး)။ အားလုံးက Abstraction တွေဘဲဖြစ်နေတယ်။ ဘာလို့လည်းတော့မသိဘူး ဒီ Abstraction တွေကို ဘယ်လို (How) အလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကို Programmer စလုပ်ကာစက မစဥ်းစားဖြစ်ဘူး။ High-Level Overview တွေကိုဘဲလေ့လာဖြစ်တယ်။ အခုနောက်ပိုင်း Computer Science နှင့် Math ကို ကိုယ့်ဘာသာ Online က Self Study လုပ်တဲ့အခါမှ Abstraction တို့ How thing work တို့ဆိုတာတွေတွေ့လာရပြီး ဘယ်လိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ပိုပိုပြီးသိလာတယ်။
အခုကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ Computer ဆိုတာကအများကြီးလုပ်နိုင်တယ်… Program ရေးတာကမစ YouTube တို့ရုပ်ရှင်တို့ကြည့်တာတွေအဆုံးပါဘဲ။ ကျွန်တော်တို့ Laptop ကိုနမူနာကြည့်လိုက်ရအောင်… သူ့ကိုအားသွင်းတယ်… power button နှိပ်လိုက်ရင် OS တက်လာတယ်… ခုနကပြောခဲ့တဲ့ example တွေအကုန်လုံးလုပ်နိုင်သွားတယ်။ ကျွန်တော်အခုပေးလိုက်တဲ့ Example တွေတော်တော်များများက High-Level Overview လို့ပြောနိုင်တယ်။ တကယ်ကို Deep Down သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ဖော်ပြပါ Crash Course Computer Science YouTube Video Playlist ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။
ဒီ Playlist ကရှည်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ခွဲခွဲပြီးကြည့်မှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ အစပိုင်းမှာ computer တွေဘယ်လိုစဖြစ်ပေါ်တယ်ကစပြီး Electronic ကနေ Binary Number System တွေအကြောင်း…. အဲ့ကတစ်ဆင့် ALU တို့ Logic Gate တွေအကြောင်း… နောက်တစ်ဆင့် Storage RAM (Random Access Memory)၊ Sotrage၊ Operating System၊ Programming Language၊ Software Engineering တို့ကစပြီး ယနေ့ခေတ် Computer Science နှင့်ပါတ်သတ်တာတွေပါရှင်းလင်းထားတာက Animation လေးတွေနှင့်အတော်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဒီ Course ကိုတက်ပြီးတကယ်နားလည်တယ်ဆိုရင် Abstraction တွေကို Pass ဖြစ်ပြီးတော့ How Thing Work ကိုအနည်းနှင့်အများနားလည်မယ်ဆိုတာတော့အသေအချာပါဘဲ။
ဒီ Post မှာကျွန်တော် Abstraction ဆိုပြီးခဏခဏသုံးသွားတယ်။ မြန်မာလိုဘာသာပြန်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့် တိုတိုနှင့်လိုရင်းကိုမရောက်ဘူး abstraction ကိုမြန်မာလို define လုပ်တာနှင့် Post တစ်ခုလောက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် Abstraction ကိုသေချာရှင်းပြထားတဲ့ Video File ကိုရှာပြီးအောက်မှာပြန်ထည့်ပေးထားတယ်။
Abstraction ဆိုတာဘာလဲ Professor David J. Malan မှရှင်းပြခြင်း
မှတ်ချက်။ ဒီ YouTube Playlist လိုမြန်မာလို Animation လေးတွေနှင့်တစ်နေ့နေ့တော့ရှင်းပြနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါဦးမယ်။
သင်ကဒီ Blog Post ကိုဖတ်ရင်း Computer science ကို ကိုယ်ပိုင်လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Teach Yourself Computer Science ဆိုတဲ့ website ကိုသွားကြည့်ပြီးအဲ့ဒီ့က guidance ပေးထားတဲ့ course တွေကိုလိုက်တက်ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်။
AbstractionComputer ScienceHow Thing Work
« Big O Notation ဆိုတာဘာလဲ Algorithm Interview Preparation »